माघ ८ मा संविधान ल्याउने हाम्रो कुरा होइन : पम्फा भुषाल
Sat, Aug 18, 2018 | 16:43:56 NST
19:48 PM (4years ago )
मुख्य तीन राजनीतिक दल र नेकपा–माओवादी सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । संविधान निर्माणमा सबैको सहभागिता र सहमति खोज्ने क्रममा तीन दलले संविधानसभा बाहिर रहेका नेकपा–माओवादी लगायतका दलसँग वृहत छलफल गर्न लागेका हुन् । तर सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा या सम्मेलनले माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने कार्यतालिकामा असर गर्छ भन्नेहरु पनि धेरै छन् । भदौभरीमा सहमति जुटे खासै असर नपर्ने भन्नेहरु पनि छन् । सर्वपक्षीय सम्मेलनले संविधान निर्माणमा कसरी सहयोग गर्ला त ? उज्यालो अनलाइनका लागि साथी मिलन तिमिल्सिनाले नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुषालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
संविधानसभा बिघटन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । संविधानसभामा रहेका दलहरुसँग सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ किन देख्नुभयो ?
संविधान निर्माणको विषय हाम्रो पनि चासोको विषय हो । हाम्रो पनि सहभागिताको आवश्यकता हो । हाम्रो पनि सहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । त्यसैले अहिले हामीले संविधानसभा भित्र भएका र संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुको सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गठन गरौं र त्यहीँबाट संविधानका विषयहरु छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ भनेका हौं ।
भनेपछि माघ ८ गतेभित्र संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने दिशामा तपाईंहरु पनि लाग्नुभएको हो ?
तिथि मितिसँग हाम्रो सरोकार होइन । माघ ८ संविधानसभा भित्र भएका दलहरुको कुरा हो ।
तपाईंहरुको चाहिँ कहिले हो त ?
हाम्रो त्यस्तो यही मितिमा भन्ने छैन । छलफल नै भएको छैन । यही सर्वपक्षीय सम्मेलनले गर्ला यो विषयमा छलफल । त्योभन्दा अगाडि पनि हुन सक्ला । त्यही मिति नै पनि हुन सक्ला । समयसीमा भन्दा हाम्रो चासो चाहिँ सबैको सहमति र सहभागितामा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने हो । अलि पहिले नै राजनीतिक सम्मेलन गरेको भए छिटो हुन्थ्यो होला ।
अहिलेको राजनीतिक सम्मेलनबाट चाहिँ के होला ? संविधान माघ ८ भन्दा छिटो होला कि पर जाला ?
म त्यसरी अनुमान गरेर भन्न सक्दिन । किनकी यो हाम्रो मात्र कुरा पनि भएन । चार दलको कुरा हो । चार दल आयोजक बनेर राजनीतिक सम्मेलन हुँदैछ । त्यहाँबाट टुंगो लाग्ने कुराको मैले यसै भन्न सक्दिन ।
राजनीतिक सम्मेलनबाट त झन् संविधान निर्माण प्रकृया नै अलमलमा र अन्योलमा पार्न खोजियो भन्नेहरु पनि छन् नि ?
मुख्य कुरा विधि र मिति होइन । राजनीतिक सहमति चाहिँ मुख्य कुरा हो । त्यसपछि प्रकृयाको कुरा हो । अनि सँगसँगै तिथिको पनि कुरा हो । तिथि त माघ ८ नभएर अझै चाँडो भए नि हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो ।
सकिएला त माघ ८ भन्दा अगाडि नै संविधान ल्याउन ?
त्यो त सबैले बसेर तय गर्ने कुरा भयो ।
राजनीतिक सभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पनि माग हो तपाईंहरुको ?
हामीले त राजनीतिक सभा या सम्मेलनबाटै भनेका छौं । तर हामी वार्ता, संवाद, सहमतिबाट नै अगाडि बढ्न चाहन्छौं । त्यहाँ हुने सहमति नै मुख्य कुरा हुन्छ । संविधान सबैको सहमतिबाट बन्नुपर्छ । पहिलो संविधानमा हाम्रो सहमति हुनुपर्यो । तर हामीले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि संभव छैन । अर्कोले भनेको कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने पनि होइन । वार्ता, संवाद र सहमतिमा जाँदा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दै जान्छ, मुख्य कुरा चाहिँ राजनीतिक सहमति हो ।